Rose Aciendhel | Li Tim-Oi Foundation
Arụrụ ọrụ dị ka onye na-eme udo Mobiliser na Warrap, South Sudan, ma ugbu a bụ Isi nke Kọmitii Na-emegide Nrụrụ Aka.
Rose Aciendhel Kacthiek dị afọ 28, lụrụ ụmụ atọ.
Ọ malitere Schoollọ akwụkwọ na Mabior Yar Primary School, gụchaa akwụkwọ praịmarị na sekọndrị ya na ogige ndị gbara ọsọ ndụ Kakuma na Kenya. Site na nkwado ego sitere na LI TIM-OI Foundation na otu enyi si Germany, Rose mechara asambodo na njikwa ọrụ na Unity College, asambodo na ọzụzụ kọmpụta na First Computer Training Center nwere diplọma na mmekọrịta ọha na eze na Human Resource Management na Cross World Institute maka ọmụmụ ihe ọkachamara na Nairobi Kenya.
Ọ laghachiri na South Sudan ka ọ bịanyechara aka na nkwekọrịta udo zuru oke (CPA) wee bido ịrụ ọrụ dịka CTO n'ọfịs nke National Electoral Commission na 2010. A họpụtara Rose n'otu afọ na Ministry nke Local Government of Warrap State dị ka Gender Focal Point onye. Na 2013 Rose hoputara dika onye isi oche nke ndi otu umu nwanyi na Warrap State.
Rose bụzi onye otu Kọmitii Na-ahụ Maka Ọgwụ, Udo na idozi na Warrap State. N'oge na-adịbeghị anya, ọ gara otu ọzụzụ Ọzụzụ nke Ndị Ọzụzụ (TOT) maka Peace Mobilisers na Yei South Sudan. Ọ bụ Kọmitii Mba na-ahụ maka Ọrịa na Imezigharị, ahaziri ya na Africanlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ikpe Ziri Ezi na Ndozi (IJR).
Ọhụụ ya bụ ịkwado maka agụmakwụkwọ ụmụ nwanyị na ịmepụta mmata banyere ikike ụmụ nwanyị. Rose na - akwado obodo ya ugbu a, ezinụlọ ya na nrọ ya ga - aga maka ọmụmụ ihe ọzọ ma ọ bụrụ na enwere ohere. Epka Episcopal nke Sudan Diocese nke Wau dị na South Sudan, ezinụlọ ya na ụmụ nwanyị nke Warrap State na-ekele LI TIM-OI Foundation maka ọzụzụ Rose. '' - Rev Samuel Mabith, Disemba 2014
Onye isi ochichi nke State nke Warrap steeti họpụtara Rose ka ọ bụrụ Onye Isi nke Kọmitii Na-emegide Nrụrụ Aka. - Bishọp nke Wau, October 2015